Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.1 Sava lalana
Mahagaga ny Wikipedia. Ny fiaraha-miasa an-tsitrapo nataon'ireo mpiasa an-tsitrapo dia namorona rakipahalalana mahafinaritra izay azon'ny rehetra. Ny fanalahidy ho an'ny fahombiazan'i Wikipedia dia tsy fahalalana vaovao; Fa, ny endrika fiaraha-miasa vaovao. Ny vanim-potoana nomerika, raha ny fahitako azy, dia ahafahana miara-miasa maro. Tokony hanontany àry isika hoe: Inona avy ireo olana ara-tsiansa lehibe-olana izay tsy voavahantsika tsirairay - moa ve isika izao afaka miady?
Maro ny karazana fiaraha-miasa marobe, ary ny mpahay siansa amin'ny ordinatera dia mandamina azy ireo ho isan'ny sokajy maro mifototra amin'ny toetrany ara-teknika (Quinn and Bederson 2011) . Amin'ity toko ity kosa, hizara tetikasa fiaraha-miasa marobe amin'ny fampiasana azy ireo ho an'ny fikarohana sosialy aho. Amin'ny ankapobeny, heveriko fa manampy amin'ny fanovozana ny karazana tetikasa telo: ny famolavolana ny olona , ny antso an-telefaona , ary ny fanangonana ny angon-drakitra ( fizarana 5.1).
Hodinihiko amin'ny antsipiriany ao amin'ny toko tsirairay ny karazan'ireto karazana ireto, saingy avelao aho izao hamariparitra ahy tsirairay avy. Ny tetik'asa fanatanterahana ny olombelona dia mifanentana tsara amin'ny olana madinidinika toy ny fametahana sary iray tapitrisa. Ireo no tetikasa izay mety nataon'ireo mpikaroka momba ny fikarohana nataon'ireo mpianatra tamin'ny lasa. Ny anjara biriky dia tsy mitaky fahaiza-manao mifandraika amin'ny asa, ary ny vokatra farany dia amin'ny ankapobeny ny salanisan'ny fanomezana rehetra. Ny ohatra malaza amin'ny tetik'asa momba ny fanatanterahana ny olombelona dia ny Galaxy Zoo, izay mpilatsaka an-tsitrapo an-jatony izay nanampy ny astronoma ho sokajy vahindanitra tapitrisa. Ny tetikasa antso an-tariby , etsy ankilany, dia mifanentana tsara amin'ny olana izay hitadiavanao valim-bavaka sy tsy ampoizina amin'ny fanontaniana voafaritra mazava. Ireo no tetikasa izay mety ho tafiditra amin'ny resaka fangatahana namana. Ny anjara biriky dia avy amin'ny olona manana fahaiza-manao manokana mifandraika amin'izany, ary ny vokatra farany dia ny tsara indrindra amin'ny fanomezana rehetra. Ny ohatra malaza amin'ny antso an-doha dia ny loka Netflix, izay ahitana mpahay siansa sy hackers an'arivony maro no niasa mba hamolavolana algorithm vaovao mba haminavina ny fahitan'ny mpanjifa ny filma. Farany, ny tetikasa fanangonana angon-drakitra fandaharam-potoana dia mifanandrify tsara amin'ny fanangonana tahiry lehibe. Ireo no tetikasa izay mety nataon'ireo mpikaroka momba ny fikarohana amin'ny taona na ny orinasa mpikaroka momba ny fikarohana. Ny anjara biriky dia avy amin'ny olona izay manana fahafahana miditra amin'ireo toerana izay tsy azon'ny mpikaroka, ary ny vokatra farany dia singa tsotra amin'ny fanomezana. Ny ohatra malaza momba ny fanangonana tahirin-tseranana dia eBird, izay an-jatony an'arivony manolo-tena no manome tatitra momba ny vorona hitany.
Ny fiaraha-mientan'ny fiaraha-miasa dia manana tantara lava be sy be mpanankarena amin'ny sehatra toy ny astronomia (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) sy ny ekolojia (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , saingy tsy mbola mahazatra izany amin'ny fikarohana ara-tsosialy. Na izany aza, amin'ny fanoritsoritra tetikasa mahomby avy amin'ny sehatra hafa sy manome fitsipika manan-danja vitsivitsy, manantena aho fa handresy lahatra anao zavatra roa. Voalohany, ny fiaraha-miasa betsaka dia azo ampiasaina amin'ny fikarohana ara-tsosialy. Ary faharoa, ireo mpikaroka izay mampiasa ny fiaraha-miasa betsaka dia afaka hamaha ireo olana izay toa tsy ho vita mihitsy. Na dia matetika aza ny fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny ho fomba hanangonam-bola, dia mihoatra noho izany. Araka ny asehoko, ny fiaraha-miasa betsaka dia tsy mamela antsika hanao fikarohana mora vidy , fa mamela antsika hanao fikarohana tsaratsara kokoa .
Ao amin'ireo toko teo aloha dia hitanao ny zavatra azo ianarana amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fomba telo samihafa: amin'ny fandinihana ny fitondran-tenany (Toko 2), mametraka fanontaniana (toko 3), ary mampiditra azy ireo amin'ny fanandramana (Toko 4). Amin'ity toko ity dia hasehoko anao ny zavatra azo tsoahina amin'ny fandraisanao ny olona ho mpiara-miasa amin'ny fikarohana. Ho an'ny tsirairay amin'ireo karazana fiaraha-miasa telo lehibe, hamariparitra ohatra iray amin'ny prototype aho, maneho ireo hevitra fanampiny fanampiny amin'ny ohatra hafa, ary farany mamariparitra ny fomba mety hampiasana an'ity endrika fananganana betsaka ity ho an'ny fikarohana ara-tsosialy. Ny toko dia hifarana amin'ny fitsipika dimy izay afaka manampy anao hamolavola ny tetikasam-piaraha-miasa iombonana.